Lamaane Shiinays ah oo 200 oo baranbaro la galay garoon diyaaradeed – The Voice of Northeastern Kenya
Masuuliyiinta canshuuraha ee dalka Shiinaha oo ku sugnaa garoon diyaaradeed ayaa la kulmay arrin layaab leh ka dib markii ay fureen boorso ay lamaane wateen, taas oo ay ka heleen 200 oo baranbar oo waliba nool, sida ay sheegeen.
Sida uu qoray wargeyska Beijing Youth Daily, laamaha ammaanka ee ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Baiyun International Airport ee magaalada Guangdong ayaa arkay in waxa boorsada ku jira ay nuuxnuuxsanayaan ka dib markii ay boorsadu dhex martay mashiinka wax lagu baaro.
Arrintan layaabka leh ee lagu arkay lamaanahan da’da ah ayaa dhacday 25 Nofeembar.
Meesha waxaa ku jiray bac ay ka dhex dhaqdhaqaaqayeen waxyaabo badan oo madmadaw,” sida Kankan News ay u sheegay Xu Yuyu oo ilaalada ka mid ahayd.
Gabadh ka mid ah shaqaalihii ayaa markaas furtay boorsada, baranbaro ayaana ka soo yaacday. In ay ooydana waxyar baa uga dhimanaaa ,” ayayna hadalkeeda ku sii dartay.
Markii la waydiiyay sababta ay u safrinayaan baranbaraha, ninkii ayaa masuuliyiinta garoonka u sheegay in ay xaaskiisu jirka marsato.
Ma uusan sii faahfaahin xaaladda xaaskiisu ku sugan tahay, laakiin Yu ayaa sheegtay in masuuliyiinta loo sheegay in ay tahay nooc dawo ah oo waayadii hore la isticmaali jiray. Inta kareen dawo ah lagu qaso baranbarta ayaana jirka la marsadaa.”
Beijing Youth Daily ayaa sheegtay in aan la ogolayn in wax nool lala galo diyaaradda gudaheeda iyadoo lagu wato boorsada gacanta, lamaanihiina ay ogolaadeen in ay kaga tagaan laamaha ammaanka. Lamana oga meesha ay baranbarahaasi ku dambeeyeen.
Ma aha markii koobaad ee laamaha ammaanku ay wax layaableh ka dhex arkaan mashiinnada ammaanka lagu baaro
Bishii Agoosto saraakiisha ammaanka ayaa helay nin safrinaya labo gacmood oo binii’aadan ka dib markii ay ka soo dhex muuqdeen mashiinka x-rayg loo yaqaanno ee ammaanka lagu baaro kaas oo lagu arki karo waxa boorsada gudaheeda ku jira.
← Nin dil u gaystay gabar ay saaxibo ahaayeen oo maanta maxkmad ka hor muuqan doona
2 qof oo maanta shil ku dhimatay ismamaulka Nyamira →